Sida looga qeyb galo Shirka Blogging $ 2,000 $ 49 | Martech Zone
Arbaco, Juun 16, 2008 Axad, Oktoobar 21, 2012 Douglas Karr
Waxaa jira waxoogaa shirar blog ah oo ka dhaca waddanka gudihiisa sannad kasta. Qiimaha kaqeybgalka shirka barta wax lagu qoro waa mid aad u weyn, oo kuu soo bandhigaya habeynta mashiinka raadinta, nuqul qorista, tiknoolajiyada baloogga iyo sida looga dhigo bartaada khibrad u leh mid faa'iido leh. Taasi waa sababta kaqeybgalayaal badan ay u bixiyaan lacag kor u dhaafaysa $ 2,000 si ay uga qayb galaan shirarkan.
Uma baahnid inaad bixiso $ 2,000, in kastoo! Sidee buu $ 49 u dhawaaqaa?
Bloggers-ka maxalliga ah ee ka kala imanaya Indiana oo dhan ayaa ku soo ururin doona Xarunta Campus IUPUI Ogosto 16-17th, 2008, waayo Blog -ka Indiana 2008, oo ah 2-maalin oo ah baloog iyo shir baraha bulshada ah oo looga gol leeyahay in lagu dhiirrigeliyo waxbarashada, hal-abuurnimada iyo iskaashiga bulshada deg-degga ah ee barta wax ku qorta ee Indiana. Shirka waxaa kafaala qaadaya IU School of Informatics.
Blog Indiana 2008 waa shir 2 maalmood soconaya oo loogu talagay kuwa wax qora iyo kuwa cusub ee wax qora. Kalfadhiyada waxaa ku jiri doona mowduucyo ay ka mid yihiin blogging-ka bilowga ah, adeegsiga baloogyada ganacsigaaga, lacag-siinta bartaada, baloogsiga siyaasadeed iyo mowduucyo aad u horumarsan. Waqtiyadi hore, intabadan blogyada iyo shirarka laxiriira tikniyoolajiyadu waxay ahaayeen kuwa aad qaali u ah ama aad uga fog gobolka. Blog Indiana 2008 waxay dooneysaa inay u keento shir qiimo-jaban, qiime-sare leh bloggers-yada Hoosier.
Ardayda, hiwaayadaha iyo xirfadleyda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka soo qayb galaan shabakadda oo waxbartaan. Khibrad u leh barta wax lagu qoro ama baraha bulshada ma aha shuruudaha looga qaybgalo; qof kasta oo daneynaya tikniyoolajiyadda iyo warbaahinta cusub ayaa lagu soo dhaweynayaa inuu ka soo qeyb galo.
Fadhigu wuxuu ku egyahay kaqeybgalayaasha 200.
The Xarunta IUPUI Campus oo ku taal xerada IUPUI gudaha Indianapolis, IN
Maxay tahay $ 49?
Taasi waa su’aasha milyan ee doollar, sax? Shirkani maaha mid ku saabsan bixinta khidmadaha af-hayeenka xad-dhaafka ah ee loogu talagalay qorayaasha A-liiska. Waxay ku saabsan tahay ururinta xirfadlayaal halkan jooga gobolka oo isku dayaya inay ka caawiyaan dadka kale inay helaan laadkan lagu bilaabay Warbaahinta Bulshada iyo baloog-garaynta. Waxay sidoo kale ku saabsan tahay isku xirka dhammaanteen kuwa firfircoon ee hadda wax qoraya. Shaki kuma jiro in aad ka bixi doontid shirkan $ 2,000 oo talo iyo xusuus u qalma - laakiin maahan lacagta.
Isdiiwaangeli inta kuraas dhiman yihiin!
Iska diiwaangeli Maanta! Kuraasta waa xaddidan yihiin waxayna u socdaan si dhakhso ah.
Tags: blog Indianashirkii bloggingdhacdoindianadhacdo suuq geyn
Nasasho Ku Naso, Saaxiibkay Mike
Saddex Dhagax Media
Jul 16, 2008 markay tahay 8:51 PM
Tani waa wax laga naxo. Xaqiiqdii waxay igu dhiirrigelineysaa inaan ka fekero sida shir wanaagsan oo Mid-Atlantic ujeedo la mid ahi u shaqeyn karto. Waxaa jira jaamacad hufan oo dhawr mayl u jirta wadada (UVA)… hmmm. Waxay igu dhowdahay inaan kufoodo gaariga oo aan u aado Indiana qiimahaas.
Jul 21, 2008 markay tahay 9:08 PM
Waan hubaa in shirku noqon doono qarax! Farriin weyn! Waxaan kahadlayay bloger sidaa darteed waxaan seegay dhajintii ku saabsan Blog Indiana usbuucii hore - waa inaan soo dhigaa wax ku saabsan toddobaadkan!
U fiirso inaad halkaas kula kulanto!